'I-Alber Alert' I-Movie Review: I-Found-Footage Thriller
Iqonga elilula lizama ukuBamba
Amathuba xa ubona i- Alber Alert emgwaqweni omkhulu, ingqwalasela yakho ihamba ngomzuzu okanye emibini ingcinga yokuba unokubona imoto yesikrokrela, ucinga ukuba kungenzeka ukuba kude, kodwa kuthekani ukuba uyayibona? Kuthekani ukuba bekuyiididi ezimbalwa phambi kwakho? Le ngongoma ekhangayo emva kwe "Amber Alert" (ngo-2012), yakutshanje kwindlela yokufumana ifilimu "efunyenweyo" .
4, 2009, uNathan "Nate" uRiley noSamantha "Sam" Green, abahlobo abahle kakhulu kubantwana be-kindergarten, basendleleni eya eKamelback Intaba ePhoenix ukuze baqedele ukutshintshela i-tape ye-audition ye-"Amazing Race". Ngomntakwabo kaSamu oselula kaKaleb emva kwekhamera, i-trio iyaqhuba ukuya kwindawo yayo ekuya kuyo xa uNate ekhangisa i-gray iGrauty emgwaqweni omkhulu ovele wanyakazela uphawu lwe-Amber Alert. USam ubiza amapolisa, athi athe kuthatha imizuzu eyi-15 ukuba baphendule ngenxa yokutya kweefowuni, ngoko banquma ukulandela isithuthi.
Ngoxa uNate ebala ukuba isilumkiso mhlawumbi sisisombambano sokugcina kwaye sibonisa ukuba avumela amapolisa ukuba aphathe le ngxaki, uSam unxininisa ekuphishekeleni i-Honda. Xa igqiba kwisikhululo segesi kwaye abona umqhubi angena ngaphakathi, ukwazi ukucima ngaphakathi emotweni aze abone intombazana esele ilele esihlalweni sokugqibela, eyenze ukuba izimisele ngakumbi ukuqhubela phambili. Ngethuba elide beligxotha, basondele ngakumbi ekuhlanguleni umntwana, kodwa ekufuphi baya kufutshane neengqumbo zesigebengu esinobugebengu esibambe ukuthunjwa kwakhe.
"I-Alber's Alert" isisombululo sisebenza ngokukhawuleza, nangona ukuba ifilimu ngokwayo ifuna ukugcina iimeko ezinokubangela umdla. Ingxenye yengxaki ibangelwa yintlupheko yesalathisi njengoko ibinzana elincinci elincinci lisongela ukuba yi-pony ekhohlisayo, ehamba ngokulula ukuya kumdlalo wokumemeza phakathi kukaNate no-Sam njengoko zigqiba ukuba ziqhubeke nokuzikhangela okanye ziphule.
Ubhanki buya kuphinda buyeke, okwenza abalinganiswa abangaphumelelanga, abangathandekiyo ngokubanzi. Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, ukuthatha izigqibo ezingathandabuzekiyo kubonakalisa ukuphazamiseka ekupheleni.
Sekunjalo, ukunyaniseka kweso simo kuhlaselwa ekhaya ngaphezu kwegama eliqhelekileyo elifunyenweyo-gama okanye ibali le-monster, nangona i-logistics yokuba ne-protagonists kude kude ne-villain ibe ininzi ye-movie iyanciphise nayiphi na ithuba lokungcebeleka. Kukho nento ekhangayo yeHitchcockian ekwaziseni ifana ne "Window yangemva" kwi-60 mph.
Ukubamba, okubalulekileyo kulolu hlobo lwefilimu, lomelele ngokwaneleyo ukugcina ubume bendalo, nangona ukuphikisana, uhlobo lwesetyhula yencoko-ntetho kwenza konke kuve kukhulu kunamanye amaxesha. Enye ukungabikho kwenkonzo yangempela kukungabikho kwenkxaso yamapolisa - isixhobo sendawo esilungileyo esilungileyo esona sivakalelwa kukuba siyinyani kwaye siyongezela ukuba ababukeli abangenakunceda bayayiziva kulo lonke ifilimu.
Ukukhungatheka kungaba kakuhle ukuba umveleli-umlobi-wokuqala umlobi-Kerry Bellessa wayefuna ukufundisa - ngokuqinisekileyo kuya kubonisa iimvakalelo zabani na abathandekayo babo babanjwe. Kodwa ayenzi ithuba elihle kakhulu - ikakhulukazi xa inxalenye yenkxalabo isithembiso esingagcwalanga sefilimu.
Kwaye ngezinye iinkalo, kufuneka uzibuze ukuba yonke loo nto ivakalelwa kukuba iyaphumelela kwinkqubo ye-Amber Alert.
Ukwenza oku: C + (Uqinileyo, ucingisisa abalinganiswa, udibeneyo kwaye ubudlelwane babo abuphelelwanga)
Isikhokelo: C (Ukudala ixesha elide, kodwa bambalwa kakhulu kwaye liphakathi)
Iskripthi: D + (Umxholo othakazelisayo uya kuphuhliswa)
Gore / Iimpembelelo: N / A (Akukho nto ifunekayo kwinqanaba)
Ngokubanzi: C (Iyamkeleka ngokumangalisayo kodwa ikhutshulwa ngokukhawuleza)
I-MPAA Isilinganiselo: R, ngokubambisa umxholo kunye neengxelo zesondo
"I-Alber Alert" ilawulwa nguKerry Bellessa kwaye ivalwe R yi-MPAA ngento ethile ephazamisayo kunye neenkcukacha zesondo.
Ukwazisa: Umsasazisi unikezelo lokufikelela mahala kule nkonzo ngenjongo yokuphonononga. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, nceda khangela iMgaqo-nkqubo Wezolawulo.
Iimviezo zeMoya eziPhezulu zaso sonke ixesha
Isibhengezo seMfazwe saseBin Laden e-United States, 1996
AbaMnyama (Ukuchithwa kwePasses kunye nokuHlanganiswa kweMibhalo) UMthetho uNombolo 67 ka-1952
Iziganeko ezinkulu kwi-Life Alexander